China ZAZE Petro-simika Process Pump-1 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Convista
ZAZE Petro-simika Process Pump-1
Izahay, mifanaraka amin'ny lamina famolavolana sy fanamboarana API61011th Centrifugal Pump ho an'ny solika, petrochemical ary gazy voajanahary dia mampivelatra paompy fizotran'ny petra-simika ZA / ZE.
Ny vatan'ny paompy lehibe, arakaraka ny endrika fanohanana, dia mizara ho rafitra roa: OH1 sy OH2, ary ny mpanentana dia rafitra misokatra sy mihidy.
Ny an'ny ZA dia an'ny OH1, impeller mihidy; ary ZAO dia ao amin'ny OH1, iray misokatra;
Ny ZE dia ao amin'ny OH2, misy mihidy ary ny ZE0 dia ao amin'ny OH2, misy misokatra.
Ny paompy ZE, arakaraka ny ambaratonga faneriterena, dia mizara ho sokajy telo ihany koa: D, Z ary G (D matetika tsy misy marika) amin'ny toe-javatra iasana.
Izy io dia mahita fampiharana be dia be amin'ny toe-javatra fitaterana ny madio na mitresaka amin'ny tsindry avo sy salantsalany, manimba ary mitafy akora ho an'ny indostria toy ny fanadiovana solika, indostrian'ny simika arintany, indostrian'ny petrochemical, injeniera simika masira, fiarovana ny tontolo iainana, pulp taratasy ary fanaovana taratasy fanondranana rano anaty ranomasina, fitsaboana rano ary metallurgy, indrindra ny fitaterana tosidrà be loatra, misy poizina, mora mirehitra, mety hipoaka, ary mahery vaika manimba amin'ny sehatra toy ny fitaovana olefin, soda caonic membrane ionic, famokarana sira, zezika, fitaovana osmosis miverina. , fanarian-drano amin'ny ranomasina, MVR ary fiarovana ny tontolo iainana, sns., mampiseho hery lehibe.
Mikoriana: Q = 5 ～ 2500m3 / h Loha: H ≤ 300m
Ohatra: ZEO 100-400
ZEO -------- Kaody andian-dahatsoratra ZE Pump
Ry mpanentana misokatra semi-open
100 -------- savaivony outlet: 100 mm
400 -------- savaivony nomeraonan'ny impeller: 400 mm
1. Ny henjana sy ny tanjaka dia mihatsara kokoa amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny famolavolana ny shafting. Izany dia manatsara ny fahamendrehana amin'ny paompy, tsy mampanantena fiainana lava kokoa sy mampihena ny vidin'ny asa.
2. Ny vatana mitondra tena dia natao ho rafitra roa hampangatsiatsiaka amin'ny alàlan'ny fanamafisana voajanahary sy rano. Raha toa ka misy antonony mihoatra ny 105 ℃, dia manoro hevitra ny hampiasaina amin'ny rafitra fanamafisana rano, izay mampihena ny mari-pana entin'ny solika fanosotra mangatsiaka ho an'ny tontolon'ny asa tsara kokoa;
3. Ny fonosana paompy dia misy lavaka mangatsiaka A, izay mampihena ny mari-pana amin'ny lavaka fametahana masinina amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny lavaka mandritra ny androm-piainana maharitra.
4. Ny paompy mpanetsika paompy dia mihidy amin'ny alàlan'ny fampidirana ilay mpanasa lamba mihidy alemanina. Noho ny fanasan-damba dia tsy voavaha ny voanjo raha toa ka mihodina na mihovotrovotra ny paompy. Midika izany fa ny paompy dia mitaky fepetra fandidiana sy fametrahana ambany kokoa.
5. Ireto paompy misy renirano be mikoriana ireto dia misy vatan-trano misy trano roa, izay natao handanjalanjana tsara ny hery radial namboarina ambanin'ny fepetra asa tsy natao. Ankoatr'izay, mitady hery axial mifandanja izy amin'ny fampiasana peratra famehezana sy lavaka fandanjana.
6. Ny endrika famehezana mekanika toy ny integral, terminal tokana na terminal misy indroa, miaraka amin'ireo rafitra famehezana fanampiny dia azo ampiasaina araka ny antonony izay hoentina, mba hahatonga ny tombo-kase sy ny fitoniana azo antoka. Ny famehezana sy ny fanasana dia hatao mifanaraka amin'ny API682. Ny famehezana paompy dia azo namboarina arakaraka ny fitakian'ny mpampiasa manokana.
7. Ny zana-kazo dia omena dingana zoro, izay manilika ny fivezivezena amin'ny fifampiraharahana amin'ireo mpanentana, ho an'ny fahombiazan'ny asa ambony kokoa amin'ny fametrahana sy fanaparitahana.
8. Miaraka amin'ny fametahana diaphragm mitatra, ny paompy dia tsy mila famongorana ny fantsona sy ny fizaran-tany ho an'ny fanitsiana sy fikojakojana ny masinina manontolo.
Previous: Paompy fanaterana particle mivaingana ZAO
Manaraka: Paompy Zirconium
Spring nametraka karazana ambany fiakarana amin'ny lever fiarovana v ...
T karazana sivana
Karazan-jaza feno feno lohataona miaraka amin'ny fiarovana azo ...